Maitiro ekuJailbreak iOS 8.1.3 - 8.4 paMac nePP Jailbreak | IPhone nhau
Maitiro ekuJailbreak iOS 8.1.3 - 8.4 paMac nePP Jailbreak
Tinogona kukanganwa nezve chaiwo michina uye matambudziko nekuonekwa kwekutyaira kuenda kuJailbreak iOS 8.1.3, 8.2, 8.3 uye 8.4 pane yedu Mac. nzira yekukurumidza. Tinokupa zvese zvakadzama pazasi nemifananidzo uye nhanho-nhanho mirairo.
Chishandiso chine iOS 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4 yakaiswa. Kuiswa kwakachena kuburikidza neTunes kunogara kuchikurudzirwa, zvigadziriso kuburikidza neOTA zvinopa matambudziko uye maitiro acho achazotadza.
iTunes uye Xcode yakavharwa
Yako iPhone, iPad kana iPod Kubata kunofanirwa kuve nako "Tsvaga yangu iPhone" yakaremara, hapana kiyi yekuvhura uye zvinokurudzirwawo kuti uiise mune yendege modhi.
Inokurudzirwa (kunyangwe isina kukosha) gadzira backup nekuda kwematambudziko anogona kumuka panguva yekuita uye ayo anogona kumanikidza iwe kudzoreredza chishandiso chako nekurasikirwa neruzivo.
Dhawunirodha application yacho PP25 kuenda kuJailbreak Mac OS X kubva Iyi link.
Kana zvese zvataurwa pamusoro zvasangana, unogona kubatanidza yako iPhone, iPad kana iPod Bata kune yako Mac.Vhura iyo PP Jailbreak application yawakangotora iwe, mirira iyo kuti uone yako kifaa yakabatana neMac yako uye tinya paJailbreak. bhatani. Tinokurudzira kuti ubvise iyo sarudzo "Isa PP Mubatsiri" (pasi kuruboshwe), asi hazvina basa kuti zviitwe.
Paunodzvanya bhatani reJailbreak, zvese zvinodiwa zvatakaratidza kare uye zvawakatosangana zvichabuda, saka tinya pa «Enderera»
Mirira kuti maitiro apedze uye usadimbure yako iPhone kusvikira zvese zvapera. Paunenge wapedza, iwe unenge uine Cydia pane chako chishandiso chakagadzirira kuenda uye kumisikidza yako aunofarira tweaks.
Panguva ino iyi PP25 Jailbreak inofanirwa kusanganisira zvese zvakagadziriswa izvo zvakatoitwa kuTaiG imwe, asi isu tichiri muchikamu chekuyedza saka hatigone kuzvisimbisa. Chatinogona kukuvimbisa ndechekuti inoshanda pasina matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Maitiro ekuJailbreak iOS 8.1.3 - 8.4 paMac nePP Jailbreak
Pindura kuna Davicitoloco
Ini ndaizozviita asi zvinokupa imwe mhando yekukanganisa?
Ita shuwa iwe uteedzere nhanho dzese uye wosangana nezvose zvinodiwa
Matanda padanho 5/8
Alexander diaz akadaro
Ini ndaigona kuzviita pane iPhone 6plus, asi iPad mweya
Pindura kuna Alejandro diaz
Iine iPad, iTunes yakavhurwa uye haipere
Ndakayedza kanoverengeka uye inogara ichimira
David Israel akadaro
Ndakaiyedza pane yangu Iphone 5c, uye yakashanda zvinoshamisa, ini ndine iyo ios 8.4, ndatenda nemupiro wako !!!
Pindura David Israel
Ini ndinowana «Jailbreak yakundikana!, Kanganiso mukugadzirira nharaunda. Dzorera chigadzirwa uye edza zvakare », ndiko kuti, chii kuna tete vako
Pindura kuna migui
Ini ndinowana kukanganisa kweangu iPhone 6, chii chandingaite?
Iko hakugone kuve nekukundikana, inosvika nhanho yechitatu uye kutadza kusvetuka ini ndakaedza katatu uye nguva dzose zvakafanana
Ini handinzwisise zvekuvhara Xcode, zvinoitwa sei? kana mumwe munhu achigona kundibatsira ??. Ndatenda
Pindura kuti iguazu
Nhasi izuva rePrimiyamu reAmazon, nakirwa nezvipiwa izvi pa iPhone accessories
25pp inotangisa yayo jailbreak chishandiso cheMac